LABRAHUAHUA IMBWA INOBEREKA RUZIVO UYE MIFANANIDZO - IMBWA
Labrahuahua Imbwa Inobereka Ruzivo uye Mifananidzo
Chihuahua / Labrador Retriever Misi yakasanganiswa Yembwa
Peppie the Labrador Retriever / Chihuahua mix (Labrahuahua) pazera remakore mashanu- 'Tine Chihuahua / yero Lab musanganiswa, (amai vaive iro Lab). Isu takamununura aine 3 mwedzi uye 4lbs chete. Akatengeswa kwandiri semusanganiswa weChihuahua asi airatidzika kunge labhu panguva iyoyo. Iye zvino ave nemakore mashanu, mapaundi makumi matatu. Inenge makumi maviri nemaviri masendimita kureba kubva pamutsipa kusvika pasi pemuswe wake. Iyo girth yechipfuva chake yakakura, ese Lab, kuti kana iye akarara pasi anotarisa akagwamba ipapo asi iye asiri. Tinonetsekana kutsvaga mabhachi nehembe zvinoenderana pachipfuva chake. Peppie inoshamisa, akangwara kwazvo, ane rudo asi imbwa inodzivirira zvakanyanya, ane iyo kuhon'a nekuhukura nyaya yakawanda yeChihuahua inozivikanwa, Peppie chete ndiye anozviitira kune vausingazive, ruzha padyo nesuo redu, uye iri Lab yekuhukura uye imbwa hombe kurira. Haana imbwa diki chirpy bark. Zvimwe kunze kweizvozvo (izvo zvatinoramba tichishanda naye) Peppie imbwa inoshamisa kwazvo uye ine rudo uye takakomborerwa akauya muhupenyu hwedu. '
Labrahuahua haisi imbwa yakachena. Muchinjikwa pakati pe Chihuahua uye iyo Labrador retriever . Nzira yakanakisa yekuziva hunhu hwerudzi rwakavhenganiswa ndeyekutarisa mhando dzese mumuchinjikwa uye uzive kuti iwe unogona kuwana chero musanganiswa wechero hunhu hunowanikwa mune chero rudzi. Haasi ese eaya akagadzika imbwa dzakauchikwa dziri kuberekwa dziri 50% dzakachena kusvika ku50% dzakachena. Zvakajairika kuti vafudzi vaberekane mizhinji-chizvarwa michinjikwa .
Sukhie the Chihuahua / Labrador Retriever mix (Labrahuahua) pazera remakore 1- 'Sukhie imbwa yekununura. Ndakamuwana kubva kunochengeterwa mhuka paakave nemavhiki masere ekuberekwa, uye iye zvino ave negore. Akangwara kwazvo, ane hushamwari, anotamba, uye akavimbika. Anoda kubvundisa, uye kudzingirira tenesi bhora (aya ndiwo maitiro aanowana mazhinji ekurovedza muviri, iye anoda kumhanya). Anoita hunyengeri hwakawanda hwekurumwa kwechizi. Changu chandinofarira ndechekuti anazevezera! Anotamba nematoyi ake anodonha zvakanyanya! Ane hunhu hunoshamisa, kazhinji akasununguka asi anogona kuwana kakutya uye kufara dzimwe nguva akatenderedza vamwe vanhu, imbwa, uye mumota. Anorema makumi matatu nemashanu. Anoita kuti moyo wangu unyemwerere mazuva ese! '
Hulk weChihuahua / Labrador Retriever musanganiswa (Labrahuahua) pazera remwedzi minomwe akapfeka ngowani yaSanta— 'Uyu ndiHulk iye musanganiswa weChihuahua / Labrador. Akazvibata chaizvo. Anoda kutamba achitora nematoyi ake kana kukumbundira pasi pegumbeze neni. '
Neiko the Lab / Chihuahua mix (Labrahuahua) sembwanana— 'Zita rembwanana yangu ndiNeiko ndiye tsananguro yehybrid. Handina kumbobvira ndambofunga yeyero lab uye 5lbs Chihuahua angadai akagadzira mbwanana zvakadaro zvakadaro yakanaka seye. Neiko akangwara zvakanyanya aive hari yakadzidziswa paingova nemavhiki matanhatu chete! Mavara ake anobva kuna baba (Chihuahua) asi ake chaiwo maficha zvirokwazvo ese anobva kuanoyevedza Lab. Pa5-mwedzi-yekure akayera 49lbs. Ndiri kuda kuziva kuti akakura sei. Handina kumbobvira ndadaira kuti ichokwadi kudzamara ndasangana nevanoshamisa varidzi vekare avo vandibvumira kuti ndione vese amai nababa. Ivo vakati zvirokwazvo yaive tsaona uye vese vakashamisika zvikuru sezvo vaive nembwa dzese kwemakore. Akaunza mufaro wakanyanya mandiri uye nevarume vangu hupenyu. '
Neiko iyo Lab / Chihuahua musanganiswa (Labrahuahua) sembwanana
Neiko iyo Lab / Chihuahua musanganiswa (Labrahuahua) sembwanana yakapararira pasi
Neiko iyo Lab / Chihuahua musanganiswa (Labrahuahua) sembwanana mubhavhu
Peppie the Labrador Retriever / Chihuahua musanganiswa (Labrahuahua) pazera remakore mashanu akarara pamubhedha
Peppie the Labrador Retriever / Chihuahua mix (Labrahuahua) achiwana chinwiwa panguva yekufamba- 'Unogona kuona lab maari uye nekureba kwemuviri wake'
Peppie the Labrador Retriever / Chihuahua musanganiswa (Labrahuahua) achizorora nemuridzi wake
Peppie the Labrador Retriever / Chihuahua mix (Labrahuahua) pazera remakore mashanu- 'Ndiye bhudhi yedu yekutsvinyira, anofarira kunamira! Nguva yekurara pamubhedha wedu inguva yaanofarira! '
Chinyorwa cheLabrador Retriever Yakavhenganiswa Mhando Dzembwa
imbwa dzinobereka dzakakotama pamberi makumbo
jack russell uye dachshund musanganiswa
yorkie terrier kusanganisa ne shih tzu
shiba imi blue heeler mix
pit bull terrier boxer musanganiswa
makate ane mhete pamiswe yawo